ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားနေသည့်ဖြစ်စဉ်များနှင့် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Complaint / Claim » ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားနေသည့်ဖြစ်စဉ်များနှင့်
- happyclub president
Posted by happyclub president on Jun 5, 2012 in Complaint / Claim, Members |4comments
၀ဘ်ဆိုက်တွေ ပိတ်လိုက်ကြပါ ...
အင်တာနက် သူရဲကောင်းတွေအားလုံးကို ခြုံငုံ ပြီးဘဲပြောလိုက်မယ်
သုံးနေတာ အင်တာနက် ..ဆက်သွယ်တာ world ကို အတွေးအခေါ်တွေ အမြင်တွေ ကြီးမား ကျယ်ပြန့်နေရမှာပေါ့ လုပ်နေတဲ့အလုပ်က ခေတ်နဲ့ အညီ ပြေးနေကြတယ်..တွေးခေါ်ရေးသားနေကြတာက နိမ့်ကျတဲ့အတွေးခေါ်
ကျဉ်းမြောင်းတဲ့အမြင်တွေနဲ့ဆိုရင်တော့ တိုးတက်မြင့်မားတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲရောက်ပြီး BC ခေတ်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေနဲ့ ကျောက်ခေတ်လူသားတွေ ရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ဆိုရင်တော့ website တွေပိတ်ပြီးနိမ့်ကြတဲ့ ကိုယ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့နေရာတွေကိုသွားလိုက်ကြပါ.
ကိုယ့်အိမ်မှာ ရှိနေတဲ့မိဘ ညီကို မောင်နှမတွေကိုပြောနေတာလာ..ဒီလောက်ဘဲတွေးခေါ်ရင် ဒီလောက်နဲ့အဆုံးသတ်လိုက်လို့ရပါတယ်..ကိုယ့်မှာရှိနေတဲ့ အရည်ချင်း ကိုယ်ကို တိုင်ဘဲအသိဆုံးပါ..တဦးတယောက် ဝေဖန်တာ လောက်နဲ့တော့ လူတစ်ယောက်ရဲ့အရည်ချင်းကိုမသိနိုင်ဘူး..ကိုယ့်ကို ကိုယ်အသိဆုံးပါဘဲ…ငါဘာလဲ ငါဘယ်သူလဲ ငါဘယ်အဆင့်လဲဆိုတာ.
အိမ်မိသားစု ရပ်ကွက်မိသားစု တိုင်းပြည်မိသားစု world မိသားစု ဒါတွေသိကြရဲ့လား..မိသားစုဆိုတဲ့ စာသားရဲ့ အတိမ်အနက်ကိုရောသိကြရဲ့လား..ဖွင့်ဆိုကြည့်ပါ
world မိသားစု အနိမ့်အမြင့် အဖြူအမဲ ဆန့်ကျင်ဘက် အင်္ဂါရပ်တွေ မြောက်များစွာနဲ့ရှိနေကြတယ်
မင်းကတော့ဒီမိုကရေစီ ငါကတော့ဆိုရှယ်လစ် သူကတော့ကွန်မြူနစ်
ငါကတော့ဘယ်လိုဝါဒ ဘယ်လိုအယူဆ မြောက်များစွာ
ဒါပေမဲ့လဲ လူ လို့ဘဲ ကင်ပွန်းတတ်ရမှာဘဲ ဘယ်လိုလူကိုမှ animal လို့ပြောလို့မရပါဘူး ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် လူဆိုတဲ့အင်္ဂါရပ်နဲ့ရှိနေလို့ဘဲ
တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဘာများပိုသွားတာ လျော့နည်းသွားတာ ရှိနေလို့လဲ
မြိန်းရာ ဟင်းကောင်း ခင်ရာဆွေမျိုး ဆိုသလိုဘဲ ကိုယ်ယုံကြည်ရာ ကိုယ်မှန်ရာ ခိုင်းမြဲတယ်လို့ထင်တဲ့ ဘာသာတရားကို ကိုယ့်အယူဆနဲ့ကို
မင်းကတော့ ဗမာ ငါကတော့ ကုလား(muslim) သူကတော့ တရုတ်
မွေးလို့ ထွက်လာတဲ့နေရာကလဲ တစ်နေရာကဘဲ ဆို့ပြီးကြီးပြင်းလာတဲ့
နို့ကလဲ ဒါဘာဘဲ ဘယ်လူသားက Dog နို့ ဆို့ထားလို့လဲ …….
ဒါပေမဲ့ လဲ ဘာသာတရာကင်းမဲ့ချင်း ပညာရယူနည်းပါးချင်း လူ့ကျင့်ဝတ်
လူ့စရိုက် ကျဉ်းမြောင်းတဲ့နေရာ မှာ နေထိုင်ပြီး နိမ့်ကျတဲ့ အတွေးခေါ်ရှိနေကြတဲ့လူတွေအတွက်တော့………..ငါမသိဘူး
ဘယ် ဘာသာတရားမှ လူသားချင်း စာနာကင်းမဲ့တဲ့ အတွေးခေါ် အသိပညာ ပေးထားချင်း မရှိပါဘူး
ဒါဆိုဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ အခုန ရေးခဲ့သလိုဘာဘဲ ပညာ သာသနာ ကင်းမဲ့ကြတဲ့ လုပ်ရပ်တွေဘာဘဲ
လူတစ်ယောက် ကိုဒီလိုလုပ်ရက်တွေ ထိန်းချုပ်နိုင် တဲ့အရာက ဒါဘာဘဲ
လူသားတစ်ယောက်မှာ သာသနာ ပညာအရည်းချင်း အဲ့ဒါတွေကဘဲ ဘောင်းတခုထဲကို ထည့်ပြီး ဒီလုပ်ရက်တွေ မကောင်းမှု ဒုစရိုက်ဆိုတဲ့လုပ်ရက်တွေ မလုပ်မီအောင် ထိန်းချုပ်ထားတာပါဘဲ ဒီလို ကိုယ့်ကိုကိုယ် ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့လူက ဘာသာ သာသနာ ခေတ်အတတ်ပညာ က ပေးတဲ့ အသိညာဏ်ဘဲ တားဆီးလို့ရတယ်
ဒါတွေကိုမှ မသိမတတ် နားမလည်ကြတဲ့ သူတွေဘဲလုပ်ကြတယ်
လုပ်ရက်ကိုကြည့်ပါ သာသနာ လက်ခံပါ လူ့ကျင့်ဝတ် လူ့အသိုင်းဝိုင်းက လက်ခံလား world မိသားစုက လက်ခံလား
ဒီဖြစ်ရပ်မှာ မင်းတို့ရဲ့ မိသားစုဝင် တဦးတယောက် ပါသွားတယ်ဆိုရင် ခံစားကြည့်လိုက်ပါ နှလုံးသားရှိတဲ့သူ မှန်ရင် ခံနိုင်စွမ်း မရှိနိုင်ပါဘူး …
ဒါကို မင်းတို့က ငါသာတယ် မင်းနာတယ် သူတို့ခံရတာ မင်းကနာနေသလား ဘာတွေလဲ ဘယ်လိုဟာတွေလဲ နဖူးပေါ်လက်တင်ပြီး စဉ်းစားကြည့်ပါ ငါတို့ကဗမာ သူတို့က ကုလား ဘာတွေလဲ ဘယ်လိုဟာတွေလဲ ………..
ဒီကနေ့လိုတိုးတက်ပြောင်းလဲ နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ ဒီလိုလုပ်ရက်တွေ ဘယ်နှစ်ယောက်လုပ်နေလဲ……………
ဒီကနေ့လူတွေ ဘာလုပ်နေကြလဲ ခေတ်ကြီးနဲ့အညီတိုးတက်ပြောင်းလဲရေးကို စဉ်းစားတွေခေါ်ပြီး လုပ်နေကြတဲ့ ခေတ်မှာ မင်းတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေ အသိပညာတွေ ဘယ်အဆင့်မှာ ရှိသေးလဲဆိုတာ စမ်းစစ် လိုက်ပါ။။။။
website တွေပိတ်လိုက်ကြပါ ။
About happyclub president
happyclub president has written 1 post in this Website..
View all posts by happyclub president →
ရေးတဲ့သူကရော ဘယ်အဆင့်မှာရှိလဲဟင် သိချင်လို့ဘာ
သမိုင်းတွင်တဲ့ လူသတ်သမားများဖက်မှ ဝင်ပြီးအွန်လိုင်းတက်ဆဲနေသော တောင်ကုတ်မှခွေးဝဲစား
(၄)San Tun Kyaw
(၁၃)happy club president
မနေ့ ကပို့ စ်မှာ ဒီကောင်ဝင်ပြောသွားတာ။
happyclub president says:
မင်းတို့ အားလုံးကို မင်းအမေကိုသွားပြော မေလိုးဗမာ
@အေးဝတီ ကြီး နှင့်.. မြန်မာပြည်အနောက်ဖက်ခြမ်းမှ ရွာသူားများခင်ဗျား..
တောင်ကုတ်မြို့အရေးအခင်းအပါအ၀င်… လူမျိုးရေး..ဘာသာရေးဆိုင်ရာများကို.. သတင်းအနေနဲ့.. ဓါတ်ပုံအထောက်အထားတင်တာကလွဲပြီး.. ကိုယ်ပိုင်သဘောထား.. မှတ်ချက်.. တို့နဲ့..ရေးတင်ခွင့်မပေးနိုင်တော့ပါ..
မြန်မာတပြည်လုံးမှာနေကြတဲ့.. မြန်မာလူထု(မွတ်စလင်များအပါအ၀င်) အကျိုးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်..
အပျက်ပျက်နဲ့.. နှာခေါင်းသွေးထွက် ဆိုတဲ့.. စကားပုံရှိပါတယ်..
မြန်မာပြည်ကိုချစ်ရင်.. မြန်မာဆိုရင်(မွတ်စလင်များအပါအ၀င်) ကိုယ့်တိုင်းပြည်အကျိုးစီးပွား.. .စောင့်ရှောက်ရမယ့်တာဝန်ရှိပါတယ်..
သေဆုံးသွားသူများကို.. ကိုယ်ချင်းစာဝမ်းနည်းစွာနဲ့.. ကောင်းမွန်ရာဖြစ်ကြဖို့.. ဆိုင်ရာဘာသာသာသနာများအရ… ဆုတောင်းပေးကြပြီး.. ကျူးလွန်ခဲ့သူများကိုလည်း.. ရာဇ၀တ်ကြောင်းအရ.. ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူစေဖို့ပါပဲ..
ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေ လုပ်ကြပါလိမ့်မယ်…
အေးဗျာ လူယဉ်ကျေးမှုတွေတိုးတက်လာပြီလာမှတ်တာ တောတွင်းအရိုင်းအစိုင်းခေတ်ကလူတွေ
သူတွေပါဘဲ၊မှန်မမှန်မစီစစ်ဘူး၊ ကျေးဇူးတရားမသိတတ်ဘူး၊ သူတို့က ဘင်္ဂလာလူတွေဆီမှာဘဲ
ရန်ကုန်(၂) သံတွဲသာ(၂)ပါ၊ သတင်းကအမျိုးမျိုးလဲကြားတယ်၊ဂိတ်အချင်းချင်းမကျေနပ်